CI — MYSTERY ZILLION
March 2014 in Web Development
CI CRUD နဲ့ tutorial ကောင်းကောင်းလေးတွေ ရှိရင် ကူညီပါဦး
simple blog တခု လုပ်ကြည့်နေတာ အဆင်မပြေလို့ပါ
March 2014 Administrators
ရုံးက CI သုံးတာလား ? ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် CI ကို လေ့လာတာလား ?
CI က owner အသစ်ရှာနေတယ်လို့ ဆိုထားတယ်။ http://ellislab.com/blog/entry/ellislab-seeking-new-owner-for-codeigniter
Github page မှာတော့ active ဖြစ်နေတုန်းပဲ https://github.com/EllisLab/CodeIgniter/commits/develop
version 3.0 ဘယ်တော့ ထွက်မလဲ မသိသေးဘူး။
http://henrihnr.wordpress.com/2009/04/26/simple-crud-application/ မှာ ရေးထားတာ ဖတ်ရတာ လွယ်ပါတယ်။
ဒီ Tutorial မှာတော့ CI version က တော်တော်နိမ့်တယ် (Version 1.7 လားမသိဘူး)။ လက်ရှိ Version နဲ့ဆိုရင်တော့ Controller တည်ဆောက်တဲ့နေရာတို့၊ တခြား CI framework ရဲ့ build-in features တွေ အသုံးပြုတဲ့နေရာမှာတော့ error တက်ပါလိမ့်မည်။
ဒါပေမယ့် PHP MVC framework တစ်ခု ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ၊ CI ကို အကြမ်းဖျင်း လေ့လာချင်တာမျိုးဆိုရင်တော့ ဒီ Tutorial က အထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ်။ တက်သမျှ error ကိုတော့ Google မှာရှာကြည့်ပေါ့။
(Documentation ကောင်းကောင်းနဲ့ PHP MVC Framework လေ့လာမယ်လို့ စိတ်ကူးရင်တော့ Laravel ကို လေ့လာကြည့်ပါလား)
@saturngod @moeko ဟုတ်ကဲ့... အဓိကကတော့ PHP MVC Framework ပုံစံကို သိချင်တာပါ...
CI က သိလွယ်တယ်ဆိုလို့... CI ကို အရင် လုပ်ကြည့်နေတာပါ...
CI ကို အဆင်ပြေသွားရင်တော့
laravel framework လဲ လုပ်ကြည့်မှာပါ...(ရုံးကလုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူး ... ကိုယ့်ဖာသာ လေ့လာနေတာပါ)
CI and Laravel are totally differenct, just same for MVC pattern. So easy and effective way is to study for MVC pattern and learn laravel